यो हो संसारकै शक्तिशाली जासुसी सफ्टवेयर - Rastrakokhabar
संसारभर सनसनी मच्चाइरहेको पेगासस आखिर के हो ? यसले कसरी काम गर्दछ ? यसबारेमा जानौँ ।
पेगासस एक स्पाइवेयर अर्थात् जासुसी गर्ने भाइरस हो जसले चुपचाप कुनै पनि डिभाइसको जासुसी गर्दछ । पेगासस जस्ता सफ्टवेयरहरु प्रयोगकर्ताको जानकारी विना उनीहरुको फोनमा छिर्दछन् र फोनमा रहेका गोप्य जानकारीहरुलाई ह्याकर्सको हातसम्म पुर्‍याउँदछन् ।
आफ्नो फोनमा स्पाइवेयर छ कि छैन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन निकै मुस्किल छ । स्मरण रहोस् सन् २०१९ मा पेगाससको माध्यमबाट संसारका १४ सय भन्दा धेरै पत्रकार तथा सामाजिक कार्यकर्ताहरुको जासुसी भएको थियो । त्यसमा अमेजनका सीईओको ह्वाट्सएप पनि सोही सफ्टवेयरबाट ह्याक गरिएको थियो ।
इजरायलको एनएसओ ग्रुप तथा क्यू साइबर टेक्नोलोजीजले यो स्पाइवेयरको निर्माण गरेका हुन् । पेगाससको अर्को नाम Q Suite पनि हो । यो संसारको सबैभन्दा खतरनाक जासुसी सफ्टवेयरमध्ये एक हो जसले एन्ड्रोएड र आईओएस दुवैखाले डिभाइसमा आक्रमण गर्न सक्दछ ।
पेगासस सफ्टवेयरलले फोन प्रयोगकर्ताका निजी जानकारीहरुमाथि निगरानी राख्दछ । फोनमा यो सफ्टवेयरको कुनै आइकन पनि हुँदैन त्यसैले यसलाई पहिचान गर्न पनि सकिँदैन । यो सफ्टवेयरले पासवर्ड, कन्ट्याक्ट लिस्ट, क्यालेन्डर, माइक्रोफोन, क्यामरा तथा विभिन्न मेसेजिंग एपको कलिङ फिचरमाथि निरन्तर जासुसी गरिरहेको हुन्छ । अर्थात् फोन प्रयोगकर्ताको फोनकल तथा भिडियो कलका साथै टेक्स्ट मेसेजहरु पनि यसले ह्याक गरिरहेको हुन्छ ।
इकोनोमिक टाइम्समा छापिएको एक रिपोर्ट अनुसार पेगासस सफ्टवेयरको मूल्य ७० देखि ८० मिलियन डलर अर्थात् झण्डै एक अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पर्दछ । अर्थात् यति चर्को मूल्य तिरेर मात्रै पेगासस सफ्टवेयरको एक वर्षको लाइसेन्स खरीद गर्न सकिन्छ । एउटा लाइसेन्सबाट एक वर्षमा केवल ५ सय वटा फोनको जासुसी गर्न सकिन्छ ।
जनवरी २०२० मा द गार्जियनमा एक रिपोर्ट प्रकाशित भयो । जसमा दाबी गरिएको थियो कि सन् २०१८ को नोभेम्बर ८ मा विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति तथा अमेजन कम्पनीका तत्कालीन सीईओ जेफ बेजोसलाई एक ह्वाट्सएप मेसेज पठाएर उनको फोन ह्याक गरिएको थियो । त्यतिबेला बेजोसको ह्वाट्सएप अकाउन्ट ह्याक भएको थियो र ह्याकिंङको आरोप उनले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानमाथि लगाएका थिए । किनकि बेजोसलाई युवराज बिन सलमानको पर्सनल ह्वाट्सएप अकाउन्टबाट मेसेज आएको थियो । यद्यपि बेजोसको फोन ह्याक गरेर कुन कुन डाटा चोरी भयो भन्ने बारेमा हालसम्म कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक भएको छैन । उनको ह्वाट्सएप अकाउन्ट ह्याकिङका पछाडि पनि पेगाससकै हात रहेको खुलासा भएको थियो ।
सन् २०१६ मा एनएसओले पेगाससको माध्यमबाट आइफोन ह्याक गर्ने प्रयास गरेको थियो । जब एप्पलले यसको जानकारी पायो तब तुरुन्तै प्रयोगकर्ताका लागि नयाँ अपडेट जारी गर्‍यो ।
सिटिजन ल्याबको एक रिपोर्ट अनुसार विश्वका कतिपय सरकारहरुले नै पेगासस स्पाइवेयर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । यस्तो सफ्टवेयरको माध्यमबाट सरकारहरुले राज्य तथा सरकारमाथि खतरा पैदा गर्ने ठानिएका मानिसहरुको जासुसी गर्दछन् । रिपोर्ट अनुसार सरकारहरुले राजनीतिक उद्देश्यका लागि पेगासस सफ्टवेयरको प्रयोग बढाइरहेका छन् ।